BitZeny စျေး - အွန်လိုင်း ZNY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitZeny (ZNY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitZeny (ZNY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitZeny ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ZNY – BitZeny
Market ကဦးထုပ်: $73 158.00
volume_24h_usd: $4 525.36
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitZeny တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitZeny များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitZenyZNY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00671BitZenyZNY သို့ ယူရိုEUR€0.00571BitZenyZNY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00514BitZenyZNY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00614BitZenyZNY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0612BitZenyZNY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0425BitZenyZNY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.149BitZenyZNY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0251BitZenyZNY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00897BitZenyZNY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00939BitZenyZNY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.153BitZenyZNY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.052BitZenyZNY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0358BitZenyZNY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.504BitZenyZNY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.12BitZenyZNY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00923BitZenyZNY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0102BitZenyZNY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.208BitZenyZNY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0468BitZenyZNY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.711BitZenyZNY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.02BitZenyZNY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.55BitZenyZNY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.494BitZenyZNY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.187
BitZenyZNY သို့ BitcoinBTC0.0000006 BitZenyZNY သို့ EthereumETH0.00002 BitZenyZNY သို့ LitecoinLTC0.000117 BitZenyZNY သို့ DigitalCashDASH0.00008 BitZenyZNY သို့ MoneroXMR0.00008 BitZenyZNY သို့ NxtNXT0.556 BitZenyZNY သို့ Ethereum ClassicETC0.000942 BitZenyZNY သို့ DogecoinDOGE1.94 BitZenyZNY သို့ ZCashZEC0.00008 BitZenyZNY သို့ BitsharesBTS0.257 BitZenyZNY သို့ DigiByteDGB0.259 BitZenyZNY သို့ RippleXRP0.0223 BitZenyZNY သို့ BitcoinDarkBTCD0.000239 BitZenyZNY သို့ PeerCoinPPC0.024 BitZenyZNY သို့ CraigsCoinCRAIG3.16 BitZenyZNY သို့ BitstakeXBS0.296 BitZenyZNY သို့ PayCoinXPY0.121 BitZenyZNY သို့ ProsperCoinPRC0.87 BitZenyZNY သို့ YbCoinYBC0.000004 BitZenyZNY သို့ DarkKushDANK2.22 BitZenyZNY သို့ GiveCoinGIVE15 BitZenyZNY သို့ KoboCoinKOBO1.58 BitZenyZNY သို့ DarkTokenDT0.00618 BitZenyZNY သို့ CETUS CoinCETI20